Wasiirka Qorsheynta oo Sabab u Noqodey is hor istaaga Mashruucii 6-da Million Beledweyne - Awdinle Online
Wasiirka Qorsheynta oo Sabab u Noqodey is hor istaaga Mashruucii 6-da Million Beledweyne
November 19, 2019 (AO) – Dowladda Taliyaaniga ayaa shaacisey in ay dib ula noqotey kharash gaaraya 6 million oo doolar oo lagu talagaley in Magaaladda Beledweyne, gaar ahaan sidii loo dhisi lahaa wadooyinka magaaladda Beledweyne, Biyo mareeno iyo in lagu hagaajiyo Webiga si looga badbaado Fatahaadaha soo noqnodey.
Mashuurcan ayaa la sheegey in fulintiisa uu shuruudo badan ku xirey Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Jamaal Maxamed Xasan.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa inoo xajiiyey in Wasiirka iyo Dowladda Taliyaaniga ay isku maandhaafeen qaab loo fulin lahaa, waxaa lagu soo waramaayaa in Wasiirku uu doonayey in loo soo shubo lacagta ka dib uu iska u diro shirkad uu ku kalsoon yahay.
Warar kale ayaa sheegey in sidoo kale Wasiirku uu daneynayey in mashruucan dib u qiimeyn uu ku sameeyo oo Beledweyne keliya aan la gelin kharashka oo badan aawgiis.
Si kasta waxaa maanta ay warbaahinta qaar baahisey Wasiirka oo si kul kulul uga jawaabaya arintan, isagoo khalad dusha ka saaraya dowladda Taliyaaniga.
Waxaa xusid mudan in Fatahaadii ka dhacdey Beledweyne ay sababtey Khasaaro baaxad leh ii iskugu jira naf iyo maal, hase ahaatee hadii Wasiirka Qorsheynta uu sanad ka hor fasixi lahaa in la fuliyo Mashruuca, maanta reer Beledweyne dhibaatadda Fatahaada sow kama ay ka badbaadi lahaayeen.
Previous articleWaa Maxay Xanuunka Kaduudiye?
Next articleKheyre oo caawa dib ugu soo laabtay Muqdisho